Global Voices teny Malagasy » Kirin’ny lehilahy iray hianika ireo tendron-kavoana 14 avo indrindra ao anatin’ny 7 volana hanamontsanana ny zavabita tsara indrindra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Jona 2019 6:13 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Tsidika
Eo ampanatanterahana iraka hiantsika ny tendro 14 avo indrindra mihoatra ny 8000 metatra ao anatin'ny fito volana i Nirmal Purja, fantatra kokoa amin'ny hoe Nims. Sary avy amin'ny pejy Facebook tetikasa azo tanterahana. Nahazoana alalana.
Nirmal Purja MBE , fantatra kokoa amin'ny hoe Nims, no eo am-panatontosana ny fianihana ireo ‘eight-thousanders’  (tendron-kavoana 14 mihoatra ny 8000 metatra) ao anatin'ny fito volana ho fanamontsanana ny zavabita tsara indrindra. Amin'ny maha-zanakalahin'ny Indiana Gurkha  misotro ronono azy, dia nanatevin-daharana ny borigadin'ny Gurkhas koa i Nims ary nanao fanompoana tao amin'ny Tafika Manokana sangany britanika. Niroboka tao amin'ny fianihan-tendrombohitra izy rehefa nandao ny tafika ary tsy ampy efatra herinandro no nianihany ny enina amin'ireo tendro avo indrindra manerantany. Eny fa na dia mihamaro aza ireo mpianika no mandoa ny sara avo sy milahatra mba hahatratra ny tendron'i Everest — araka izay porofoin'ny sary nalaza haingana dia haingana nopihan'i Nims teo amin'ny tendro avo indrindra manerantany –  dia tsy ampy tohana ara-bola ilay mpianika hanombohany ny dingana faharoa amin'ny Project Possible mission  [iraka Tetikasa azo tanterahana]
Niezaka nanatona an'i Nims i Sanjib Chaudhary avy amin'ny Global Voices ary niresaka amin'izay antony nitarika azy handray ity fanambin'ny fianihana haingana dia haingana ity:
Global Voices (GV): Inona no nahatonga anao hanao ity fanambin'ny tetikasa azo tanterahana [Project Possible] ity? Lazalazao anay ny momba ny tetikasanao.
Nirmal Purja (NP): 14 monja eto ambonin'ny tany ny tendron-kavoana avo noho ny 8000 metatra ary samy miorina ao Himalayas avokoa ireo rehetra ireo. Efa ho valo taona ny zavabitan'olona iray tsara indrindra amin'ny fianihana ireo tendro 14 ireo. Kendreko ny hianika ireo tendro 14 ireo ao anatin'ny 7 volana monja. Ho ahy ity tetikasa ity dia fanosehana ny tenako hijery izay azo tanterahan'ny fahazakan'olombelona. Hatraiza ny vitan'olombelona, afaka mihoatra izay heverin'ny hafa ho azo tanterahana ve isika?
GV: Nahatontosa tendro enina ianao tao anatin'ny efatra herinandro. Amin'ireo tendro enina ireo, iza no sarotra nianihana indrindra ary nahoana?
NP: Tsy isalasalana fa i Dhaulagiri  no sarotra indrindra noho ny toetrandro. Nianika tao anatin'ny rivotra tafahoatra any amin'ny 70-75 mph izahay. Rehefa mihena kely ihany ny fifofofofoan'ny rivotra vao afa-mianika izahay ary rehefa mihamafy indray dia mifikitra satria tsy afa-mihetsika izahay fa raha vao manao izany dia faohiny any.
GV: Maro no miteny fa ambonin'ny Camp 4  ao Everest, ary amin'ireo eight-thousanders hafa, tsy misy miraharaha ireo mpianika hafa izany. Manify ny rivotra, ary mitsoka mafy ny tafiotra, ary amin'ny faratampony ny hafanana-hatsiaka. Inona no ataonao raha misy olona mila fanampiana raha an-dalana hanatratra ny tendro ianao?
NP: Inona no ataoko na inona no efa nataoko? tamin'ny taona 2016, nandritra ny fidinana ny Everest, nanavotra vehivavy mpianika iray navela ho faty aho, teo ambany Lavarangana tany amin'ny 8380m. Izaho no nitondra azy nidina ary nanolotra azy hokarakarain'ny Ekipam-panavotana an'habakabaka Everest tao Col Atsimo. Hanao toy izany hatrany aho.
GV: Efa nianika tendrombohitra ianao taloha. Nahita fahasamihafana ve ianao tamin'ny fianihana ireo tendro tamin'ity indray mitoraka ity? Nahamarika vokatry ny fikorontanan'ny toetrandro hita maso ve ianao tany an-tendrombohitra?
NP: Efa nianika ny sasantsasany amin'ireo tendrombohitra ireo aha taloha ary nahita ny fiovana. Mihavitsy ny orampanala, mifangaro ny ranomandry. Fiovana henjakenjana sy miharihary. Tsy maintsy mitondra rano izahay nefa taloha ny ranomandry no natsonika.
GV: Ahoana indray ary ny planinanao manaraka? Rahoviana ary ny tendro iza no kasainao hiakarana? Manao ahoana ny resaka famatsiambola? Inona no mahatonga anao mbola mazoto?
NP: Nihemotra tapabolana ny dingana faharoa rehefa mahazo vatsy aho ary mbola tsy ampy £150k izany izao. Mbola mazoto be tsy misy toy izany aho amin'izao fotoana izao. Mbola miabo hatrany ny saiko. Mahazo aingam-panahy sy fandrisihana maro avy amin'ny mpanjohy ahy ao amin'ny Instagram sy Twitter izay mitarika ahy aho.
GV: Aorian'ny fahatontosan'ny tetikasa inona indray no mety tarataratra ho anao? Inona indray ny fikasanao manaraka?
Amin'izao fotoana izao aho aloha mifantoka 100% amin'ny Tetikasa azo tanterahana. Aorian'izany — iza no mahalala? Ny hany fantatro dia mbola te-hanangombola ho an'ireo mpanao fiantrana iarahako miasa aho
GV: Farany, tsy asa mora izany mianika eight-thousanders izany ho an'olona tsotra. Inona no ilaina hianihana tendrombohitra? Efa misy fototarazo manokana ve, fanazarana sa herim-paniriana? Inona no torohevitrao ho an'olona iray te-ho mpianika?
Mila manana faharetana ara-toebatana sy ara-toetsaina ianao rehefa hianika tendrombohitra, indrindra ireo mihoatra ny valo arivo metatra. Mihevitra aho fa manana ny toebatana tsara avy amin'ny nahaterahako sy nanabeazana ahy tany amin'ny faritra avo. Manana ilay toetsaina avy amin'ny taona maro naha-tao amin'ny Tafika Manokana ahy ihany koa aho. Ireo fiarahana ireo no manome talenta manokana ahy. Makà fotoana, ireo tendro 5000, 6000, 7000 metatra no ianiho, dia fantaro hoe ahoana ny hamalian'ny vatanao rehefa mihamiakatra avo ianao. Ataovy tsimoramora, rafeto ny fahazaranao ary ankafizo ilay dia. Aza maika hihazakazaka mankany amin'ny tendro 8000 metatra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/27/140966/
 sary nalaza haingana dia haingana nopihan'i Nims teo amin'ny tendro avo indrindra manerantany –: https://www.bbc.com/news/world-asia-48401491
 Project Possible mission: https://projectpossible.co.uk/
 Camp 4: https://en.wikipedia.org/wiki/South_Col